लामा अमृत फाउन्डेसनद्वारा भलिवल | eAdarsha.com
पोखरा । अन्नपूर्णको घान्द्रुकस्थित लामा अमृत फाउन्डेसनको आयोजनामा भदौको १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म क्लवस्तरीय पुरुष, महिला, भेट्रान्स भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
फाउन्डेसनको आयोजनामा पोखराको नदीपुरस्थित कर्पाकेली समाज घरमा प्रतियोगिता गर्न लागिएको सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको हो ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने पुरुष समूहले रु. ६० हजार, द्वितीयले रु.४० हजार साथमा शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, महिलातर्फको बिजेताले रु.२० हजार, उपबिजेताले रु.१४ हजार शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने फाउन्डेसनका संस्थापक अमृत गुरुङ लामाले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै पुरुष भेट्रान्सतर्फ प्रथमले रु.१५ हजार र द्वितीयले रु.१० हजार साथमा शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार पाउने आयोजकको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै फाउन्डेसनका संस्थापक गुरुङले सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था स्थापना गरिएको भन्दै यसपटक पनि ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुदः राष्ट्रका लागि खेलकुद’ नाराका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बताए । उनले फाउन्डेसनले खेलकुद एकेडेमी निर्माण गर्ने तथा विपद् उद्दार टोली गठन गर्ने लगायतका लक्ष्यहरु राखेको पनि जनाएका छन् । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रु. ७ लाख ५० हजार खर्च लाग्ने अनुमान पनि आयोजकले गरेको छ ।
खेल संयोजक अनिल गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुदको केन्द्र बनाउन प्रदेश सरकार लागि रहदाँ थप टेवा पुग्ने विश्वासका साथ फाउन्डेसनले पनि प्रतियोगिता आयोजना गरेको धारणा राखे । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ कुल १६ टिमले सहभागिता जनाउने बताइएको छ ।
खेलकुदमै गण्डकी प्रदेश सरकारले लक्ष्य बनाएको छ : मन्त्री पुन
डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफलाई दिदीबहिनी कप राष्ट्रिय भलिबल उपाधि
नवलपुरले जित्यो गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तर जिल्ला यु–१६ क्रिकेट उपाधि
ग्रीनविच यु.के.नदीपुर भलिवल च्याम्पियन
पोखरामा भारतीय अन्तर बटालियन भू.पू. सैनिक गोल्डकप बास्केटबल च्याम्पियनसीप शुरु